“UThixo Uthanda Umphi Ochwayitileyo” | Sondela KuThixo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Sisipho esinjani esinokwenza uzive uthandwa kakhulu? Ngokuqinisekileyo abaninzi kuthi bangathanda ukufumana isipho kumntu okwenza oko kuba ethanda kungekhona kuba enyanzelekile. Eyona nto ibalulekileyo xa usipha, sisizathu. Ibaluleke kakhulu loo nto kuthi. Ngaphezu koko, ibalulekile kuThixo. Khawufunde la mazwi aphefumlelweyo kampostile uPawulos akweyesi-2 kwabaseKorinte 9:7.
Kwakutheni ukuze uPawulos abhale loo mazwi? Wayekhuthaza amaKristu aseKorinte ukuba axhase ekuncedeni abazalwana abahlwempuzekileyo bakwaYuda. Ngaba wayezama ukuwanyanzela ukuba aphe? Akunjalo, kuba wabhala wathi: “Ngamnye makenze kanye njengoko egqibile entliziyweni yakhe, kungekhona ngokukrokra okanye ngokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo.” Makhe sihlolisise esi sibongozo.
“Kanye njengoko egqibile entliziyweni yakhe.” Apha uPawulos uthi umKristu wokwenene upha kuba egqibe njalo “entliziyweni yakhe.” Kwangaxeshanye, umKristu ucinga nzulu ngeentswelo zabazalwana bakhe. Omnye umphengululi uthi ngokolwimi lwamandulo, igama elithi “egqibile” lithetha “ukuceba kwangaphambili.” Ngoko umKristu uye acingisise ngeentswelo zabazalwana bakhe nendlela anokubanceda ngayo.—1 Yohane 3:17.
“Kungekhona ngokukrokra okanye ngokunyanzelwa.” UPawulos uchaza izizathu ezimbini umKristu amele aziphephe—ukupha engafuni nokunyanzeliswa. Ibinzana lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi “ngokukrokra,” ngokuthe ngqo lithetha “ukupha ngentliziyo ebuhlungu.” Enye incwadi ithi, umphi okrokrayo okanye opha engafuni, upha “ngentliziyo ebuhlungu ecinga ngale mali imkayo.” Umntu opha kuba enyanzelekile akakwenzi ngentliziyo yakhe yonke oko. Ngubani ke ngoko ongathanda ukuphiwa ngumntu ongafuniyo okanye oziva enyanzelekile?
“UThixo uthanda umphi ochwayitileyo.” UPawulos uthi, xa umKristu efuna ukupha, umele akwenze oko evuya okanye echwayitile. Kakade ke, umntu opha eneenjongo ezintle uyavuya. (IZenzo 20:35) Umntu opha echwayitile ubonwa nanguthathatha. Igama elithi “ukuchwayita” ­liyichaza kakuhle imvakalelo aba nayo lowo uphayo ibe ubonwa nangabanye ukuba wonwabile. Siyamthanda umphi ochwayitileyo, ibe uvuyisa nentliziyo kaThixo. Enye inguqulelo ithi: “UThixo uthanda abantu abathand’ ukupha.”—IContemporary English Version.
“UThixo uthanda abantu abathand’ ukupha”
Amazwi aphefumlelweyo kampostile uPawulos asinceda sazi esona sizathu sifanelekileyo sokupha. Enoba sinikela ngexesha lethu, amandla okanye izinto zexabiso, masikwenze oko ngokuzithandela kuba sikuvuyela ukubonisa ububele kwabanye, ngakumbi abo badinga uncedo. Xa sisipha ngolo hlobo asiyi konwabisa nje iziqu zethu, kodwa siya kuthandwa nguThixo, kuba “uthanda umphi ochwayitileyo.”
Izibhalo Onokuzifunda NgoSeptemba
Eyoku-1 neyesi-2 kwabaseKorinte